२ दिनपछि धनतेरस र कागतिहार: चुपचाप किन्नुहोस यी ५ चीज, हुदैन धनको कमि! - Kohalpur Trends
२ दिनपछि धनतेरस र कागतिहार: चुपचाप किन्नुहोस यी ५ चीज, हुदैन धनको कमि!
धनियामा लक्ष्मी माताको कृपा रहने मान्यता रहेको छ। यसै कारण धनतेरसको दिन घरको बगैंचा गमला आदि स्थानमा कसैलाई थाहा नहुने गरी धनियाको दाना छर्दा लक्ष्मी प्रसन्न हुने गर्छिन्।
The put up २ दिनपछि धनतेरस र कागतिहार: चुपचाप किन्नुहोस यी ५ चीज, हुदैन धनको कमि! appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: दाङ देउखुरीमा ट्रकको ठक्करबाट ३ जनाको मृत्यु
Next Next post: प्रधानमन्त्रीको संखुवासभा यात्रा : विशेष कार्यक्रम छैन, घुमघाम मात्रै !